डा. केसीको मागप्रति बेलायतका स्वस्थ्यकर्मी र एनआरएन अभियन्ताहरुको ऐक्यबद्धता , जीवन रक्षाको माग - Himalayamail.com
लण्डन। बेलायतस्थित नेपाली चिकित्सकहरुको संस्था नेप्लिज डक्टर्स एसोसिएसन यूकेले डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि उनका जायज मागहरु सम्बोधन गरि अबिलम्ब वार्ता गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । एशोसिएसनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै समस्या समाधानका लागि तत्काल वार्ता समिति गठन गर्न नेपाल सरकारसंग माग पनि गरेको छ।
यसैगरी बेलायतमा कार्यरत अन्य नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरुले समेत चिकित्सा शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै १९ औं पटक आमरण अनशन गरिरहेका डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्। यसरि माग गर्नेमा डाक्टर , नर्स र स्वास्थ्यसेवा संग सम्बन्धित व्यक्तिहरु छन्। डा केसीले पछिलो पटक अनसन सुरुगरेको बुधबार २४ दिन हुदैछ।
बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको छाता संगठन गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) यूरोपले समेत डा केसीका मागहरुप्रति सरकारसंग यथोचित बार्ताबाट समस्या समाधान गर्न माग गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघको १३ औं युरोप बैठक तथा दोश्रो ज्ञान सम्मेलनको समापनको अवसरमा भर्चुएल माध्यमबाट आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघका युरोप संयोजक नारायण आचार्यले डा. केसीको स्वास्थ्यलाभको कामना गरे। उनले केसीका मागहरुप्रति ऐक्यबद्धता पनि जनाए।
बेलायतस्थित एनआरएन अभियन्ता तथा निबर्तमान केन्द्रिय उपाध्यक्ष कुल आचार्यले डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न र एक वार्ता समिति गठन गरी उहाँका मागहरुलाई तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारलाई अपिल गरेका छन् । सामाजिक संजालमा आचार्यले लेखेका छन् – “डा. गोविन्द केसी सबै नेपालीले श्रद्धा र सम्मान गर्ने नाम हो। नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार, कर्णाली प्रदेश लगायत देश भरि नै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुंच जस्ता मागहरु राख्दै डा. केसी १९ औं आमरणमा बस्नु भएको आज २३ औं दिन हो। यति लामो समयसम्म सरकारले उहाँका मागहरु सम्बोधन गर्न एउटा वार्ता समिति समेत गठन नगर्नु दुखको कुरा हो। ”
बेलायतका अर्का अभियन्ता एबम एनआरएनएका संस्थापक सचिब चिरञ्जीवी ढकालले डा गोबिन्द केसी जस्ता गान्धिबादी समाज सुधारक र जनतालाई चिकित्साको माध्यमबाट सेवा गर्ने समाजसेवीको जिबन रक्षार्थ हामि सबैले आवाज उठाउनु पर्ने बताउदै डा केसीका मागलाई सरकारले तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।